Su'aallo laga keenay tallaalka COVID-19 | KEYDMEDIA ONLINE
Su’aallo laga keenay tallaalka COVID-19
Waxaa walaac xooggan laga muujinayaa tallaalka COVID-19, ee Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Fadaraalka ay sheegtay in maanta la keenay Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa sii kordhaya dadka Soomaaliyeed ee dalbanaya in Dowladdu sharaxdo, tallaalka Coronavirus-ka ee maanta la keenay caasimadda Soomaaliya.
Dadka dalbanaya in Dowladdu faahfaahin buuxda ka bixiso tallaalkaan ayaa sheegaya in tallaalka ay soo saareen AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford uu leeyahay halis la xariirta xinjiowga dhiigga, isla markaana ay Dowlado waaweyn diideen in ay isticmaalaan.
Tiro ka mid ah waddamada Yurub ayaa horay u joojiyay isticmaalka tallaalka Oxford-AstraZeneca, waxayna ka sheegeen xinjirowga dhiigga.
Waddamada Ireland iyo Nederland ayaa dhawaan ku biiray liiska sii kordhaya ee wadamada joojiyay isticmaalka talaalka coronavirus ee ay soo saareen AstraZeneca iyo Jaamacadda Oxford sababo la xiriira walaac laga qabo xinjirowga dhiiga.
Holland ayaa Axaddii sheegtay in tallaalka Oxford-AstraZeneca aan la isticmaali doonin illaa ugu yaraan 29-ka Maarso, halka dalka Ireland uu isna sheegay inay si ku-meel-gaar ah u hakiyeen tallaalka.
Maadaama qaar ka mid ah wadamada yurub joojiyeen isticmaalka talaalka Oxford-AstraZeneca, Dowladda Fadaraalka waxaa looga baahan yahay in ay faahfaahin buuxda ka bixiso tallaalka saakay laga soo dajiyay Muqdisho.